Usoro kachasị mma iji rite uru na Xiaomi Mi A1 | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi, Xiaomi
Xiaomi abụrụla otu n'ime ụdị ahịa kachasị mkpa na ahịa. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na rue n'oge na-adịbeghị anya, ha rere naanị na Asia, e debere ha dịka otu n'ime ndị kachasị ere n'ụwa niile. Ugbu a ha malitere ire n'ahịa ọhụrụ, ahịa ha ga-aga n'ihu na-abawanye. Na mmalite nke ngwaọrụ dị ka Xiaomi Mi A1 Ọzọkwa enyere aka.
Ọ bụ ekwentị dị ezigbo mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ banyere mbụ inwe gam akporo Otu. Ya mere, ekwentị ahụ hapụrụ MIUI wee họrọ maka ezigbo gam akporo. Oge nke nwere ike ịbụ isi maka ụlọ ọrụ. Yabụ, Anyị na-ahapụrụ gị usoro kachasị mma nke Xiaomi Mi A1 a.
Un ekwentị nwere otutu ikike dika nke a kwesiri ka ewere zuru oke. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị usoro aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na Xiaomi Mi A1 a. Njikere izute ha?
1 Jiri ekwentị gị dị ka ihe ntanetị
2 Jiri mmegharị ahụ
3 Mkpọchi ngwa ọdịnala na mkpisiaka ihe mmetụta
4 Jiri redio FM
5 Gbanwee njupụta
6 Mgbakwunye aghụghọ
Jiri ekwentị gị dị ka ihe ntanetị
Ọ bụ ọrụ na-atọ ụtọ nke anyị chọrọ ngwa maka ya. Nwere ike gbanye ngwaọrụ ka ọ bụrụ njikwa ụwa na anyị nwere ike iji ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. Site na ịgbanye chanel na TV iji bulie olu nke ngwaọrụ ọzọ. Yabụ na ọ bara oke uru.
Zuru a budata ngwa a na-akpọ Mi Remote. Ekelere ya, ejiri ihe mmetụta infrared nke Xiaomi Mi A1 mee ihe ma yabụ anyị gbanwere ngwaọrụ a njikwa anya n'ụzọ dị mfe.
Onye na-ahụ maka Mi Mi - maka TV, STB, AC na ndị ọzọ
Jiri mmegharị ahụ
Podemos jiri ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke Xiaomi Mi A1 a ọtụtụ ihe. Maka ọtụtụ karịa ka anyị chere. Ebe ọ bụ na o doro anya na ọ bụ ụzọ eji emegharị ahụ. Anyị nwere ike igosipụta ngosi ngosi. Dị nnọọ slide mkpịsị aka gị ala na ọ ga-abịa ozugbo. Iji mee ka nhọrọ a nwee ike ịnweta ya ntọala ma họrọ swipe nhọrọ maka .ma Ọkwa. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnụ ụtọ ya.
Mkpọchi ngwa ọdịnala na mkpisiaka ihe mmetụta
El Enwere ike iji ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ekwentị mee ọtụtụ ihe dika anyi gwara gi. Otu n'ime ihe kachasị baa uru bụ igbachi ma ọ bụ meghee ngwa. Maka nke a, anyị ga-etinye ngwa nke na-enye anyị ohere ịme nke a n'ụzọ dị mfe. Enwere ngwa ole na ole iji gbochie ngwa. Mana, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji ya akara mkpisiaka mmetụta igbachi ngwa, otu n'ime nhọrọ kacha mma iji wụnye na Xiaomi Mi A1 bụ AppLock.
Jiri redio FM
Este Xiaomi Mi A1 enweghị redio FM, ọ bụ ezie na nke a abụghị nsogbu, ebe ọ bụ na enwere ụzọ iji nwee ike ige redio FM na-enweghị mkpa ịgbanye ma ọ bụ jiri data mkpanaka. Ọ bụ usoro nke dị mfe ma gịnị banyere anyị kwe ka redio na-atọ gị ụtọ:
Anyị na-emeghe ngwa ekwentị
Tinye koodu * # * # 6484 # * # *
A menu-abịa na anyị slide na njedebe
Anyị na-ahọrọ nhọrọ FMRadio
Anyị jikọọ ekweisi
Anyị na-ahọrọ ugboro ole anyị chọrọ ige ntị
Anyị nwere ike gee ntị na redio
Nsogbu kachasị na nhọrọ a bụ na ma ọ bụrụ na anyị wepu, ihuenyo, na playback ga-etre. Ma ọ bụghị na anyị nwere ike ịnụ ụtọ Igwe Redio na Xiaomi Mi A1 anyị n'ụzọ dị mfe.
Na anyị gbanwee njupụta pụtara na ọnụọgụ nke ọdịnaya gosipụtara na ihuenyo gbanwere. Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ma ọ bụ obere ọdịnaya dabere na ihe anyị kpebiri. Iji mee nke a, anyị ga-eme ya gaa na ntọala wee gaa na ihuenyo. N'ebe ahụ, anyị nwere ike ime mụbaa ma ọ bụ belata njupụta.
Site na ibelata njupụta, enwere ike ịhụ ọdịnaya karịa na ihuenyo. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-abawanye ya, ihe niile ga-adịkwa ukwuu karịa na ọ ga-adịrị gị mfe karị ịgụ ya. Ọ dabere na mmasị gị ịhọrọ otu nhọrọ ma ọ bụ ọzọ.
Mụta otu esi etinye Isiokwu Xiaomi na ekwentị gị ka hazie ya nke ọma.
Nke a bụ nhọrọ nke aghụghọ iji nweta ihe kacha mma na Xiaomi Mi A1. Anyị nwere olile anya na aghụghọ ndị a baara gị uru. Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Usoro kachasị mma maka Xiaomi Mi A1
Na inwe ike ịhazi ihe maka nseta ihuenyo nke na-abụghị olu gbakwunyere bọtịnụ ???
N'ehihie, m ka zụtara Xioami Mi A1, obi dịkwa m ụtọ. ma enwere m nsogbu ịma jijiji na-esighi ike, enwere ụzọ iji mee ka ike nke ịma jijiji. ụfọdụ ngwa na-emejuputa ya.
Daalụ na ụbọchị obi ụtọ.
M nwere A1 na m unlock kpọghee ekwt ya na mkpisiaka na kwa ntụtụ, Otú ọ dị na kpọmkwem ohere nke igwefoto ya nwere ike unlocked enweghị mkpa mkpisiaka ma ọ bụ pin
Ngwa kacha mma iji dezie ọdịyo na gam akporo